Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.1 Hordhac
Nidaamyada laga hadlayo illaa iyo hadda ee dabeecadda buug-dhaqameedka (cutubka 2) waydiinayaan su'aalaha (cutubka 3) - raadiyeyaashu waxay ururiyaan xog la'aan iyadoon si ula kac ah oo nidaamsan u bedelayn dunida. Habka lagu daboolay tijaabooyinka ku jira cutubkaan -waxaa si ka duwan kala duwan. Marka cilmi-baarayaasha ay tijaabiyaan tijaabooyin, waxay si nidaamsan u dhexgalaan adduunka si ay u abuuraan xog ku habboon in ay ka jawaabaan su'aalaha ku saabsan xiriirka sababaha iyo saameynta leh.
Su'aalaha sabata iyo saameyntu waxay aad u badan yihiin cilmibaaris bulsheed, iyo tusaalooyin waxaa ka mid ah su'aalaha sida: Miyuu kordhiyo mushaarka macallimiinta kordhiya barashada ardayda? Maxay tahay saameynta mushaharka ugu yar ee heerka shaqada? Sidee ayaa jinsi-doonka shaqo raadsadaha uu saameyn ugu yeelanayaa helitaanka shaqo? Marka lagu daro su'aalahan si macquul ah, mararka qaarkood su'aalaha sababaha keena iyo saamaynta waxay ku jiraan su'aalo guud oo ku saabsan heerka ugu sareeya ee metric. Tusaale ahaan, su'aasha ah "Runta maxay tahay in badhanka deeqda ah ee laga helo websiteka NGO-yada?" Waa runtii su'aalo badan oo ku saabsan saameynta badarka kala duwan ee deeqda.
Hal siyaabood oo looga jawaabo su'aalaha sababaha iyo saameynta ayaa ah in la eego astaamaha xogta jira. Tusaale ahaan, ku soo laabashada su'aasha ku saabsan saameynta mushaharka macalinka ee waxbarashada ardayga, waxaad xisaabin kartaa in ardaydu wax badan ka bartaan dugsiyada bixiya mushaharka macalimiinta sare. Haseyeeshee, iswaafajintaani ma muujinaysaa in mushaharka sare uu sababi karo ardayda inay wax badan bartaan? Dabcan maya. Dugsiyada ay macallimiintu kasbadaan waxaa laga yaabaa inay siyaabo badan u kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, ardayda dhigata iskuulada leh mushahar macalimiin sare ayaa laga yaabaa inay ka yimaadaan qoysaska hodanka ah. Sidaa daraadeed, waxa u eg sida saamaynta macalimiintu ay ka iman karto marka la barbardhigo noocyada kala duwan ee ardayda. Faraqa udhaxaadka aan la filayn ee u dhexeeya ardayda waxaa loogu yeeraa isku kalsoonayaasha , guud ahaan, suurtogalnimada in qofku isku kalsoon yahay wuxuu raadiyaa kartida cilmi-baarayaasha inay ka jawaabaan su'aalaha sababaha iyo saameynta ayadoo la eegayo astaamaha xogta jirta.
Hal xal oo mushkiladaha isku kalsoon waa inay isku dayaan inay isbarbardhigaan isbarbardhigyo iyagoo isku hagaajinaya kala duwanaanta la arki karo ee u dhexeeya kooxaha. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad awoodi kartid inaad soo dejiso xogta canshuurta guryaha dhowr bog oo dowladeed. Ka dib, waxaad isbarbardhigi kartaa waxqabadka ardayga ee iskuulada ee qiimaha guryaha ay isku mid yihiin, hase yeeshee mushaharka macalimiinta way ka duwan yihiin, walina waad sii ogaan kartaa in ardaydu ay wax badan ka bartaan dugsiyada leh mushahar macallin sare. Hase yeeshee, waxaa jira dad badan oo isku dhac ah. Waxaa laga yaabaa in waalidiinta ardaydaasi ay ku kala duwan yihiin heerkooda waxbarasho. Ama waxaa suurtagal ah in dugsiyadu ku kala duwanyihiin laybereeriyada dadweynaha. Ama waxaa laga yaabaa in dugsiyadu qaataan mushaharka macallinimada inay sidoo kale leeyihiin mushaar ka badan maamulayaasha, iyo mushaar bixiyaha, ma aha mushaharka mushaharka, runtii waxa sii kordhaya waxbarashada ardayga. Waxaad isku dayi kartaa inaad cabirto oo aad wax ka bedesho arrimahan, laakiin liiska qeexdooyinka suurtogalka ah waa mid aan dhammaad lahayn. Xaalado badan, adigu kaliya ma qiyaasi kartid oo u habeyn kartid dhammaan khibradaha suurtogalka ah. Iyadoo laga jawaabayo caqabaddan, cilmi-baarayaashu waxay soo saareen dhowr farsamooyin ah oo lagu sameynayo qiyaasaha natiijooyinka aan ka ahayn xog-cilmiyeedka aan-aan ka wada hadalnay qaar ka mid ah cutubka 2-laakiin, noocyada qaar ka mid ah su'aalaha, farsamooyinkani waa kooban yihiin, tijaabooyinku waxay bixiyaan rajo beddelaad.
Tijaabooyinku waxay u suurtogelinayaan in cilmi-baadhayaashu ay ka gudbaan iskudhafka xogta dabiiciga ah si ay si sax ah uga jawaabaan su'aalaha sababaha iyo saameynta. In da'da analooga, tijaabooyinku inta badan waxay ahaayeen kuwo si adag u adag oo qaali ah. Hadda, da'da dijitaalka ah, caqabadaha jira ayaa si tartiib tartiib ah u sii daaya. Ma aha oo kaliya fududahay in la sameeyo tijaabooyin sida kuwa hore loo sameeyay, hadda waa suurtagal in la kashifo noocyo cusub oo tijaabo ah.
In aan qoro ilaa iminka waxoogaa yar ayaan ku luuqday luuqadayda, laakiin waa muhiim in la kala saaro laba waxyaabood: tijaabooyinka iyo tijaabooyinka la kala doortay ee la xakameeyay. Imtixaanka , cilmi-baaruhu wuxuu isku xiraa adduunka oo markaasna wuxuu cabbiraa natiijada. Anigu waxaan maqalay habkan oo lagu sharaxay "perturb iyo ixtiraam." Tijaabin la xakameynayo cilmi-baaruhu waxa uu wax ka qabanayaa dadka qaarkood oo aan u ahayn kuwa kale, cilmi-baaruhu wuxuu go'aaminayaa dadka ay helayaan faragelinta ay kala soocaan (tusaale ahaan, daadinta lacagta). Dhibaatooyinka la isku haleynayo waxay abuuraan isbarbardhigga caddaaladda ee u dhexeeya laba kooxood: mid ka mid ah heley faragelinta iyo mid aan lahayn. Si kale haddii loo dhigo, tijaabooyinka la kala soocay ee la xakameynayaa waa xalka dhibaatooyinka dadka isku kalsoon. Hase yeeshee, tijaabooyinka Perturb-oo-kormeera, waxay ku lug leeyihiin hal koox oo keliya oo heley wax-ka-qabashada, sidaas darteed natiijada waxay u horseedi kartaa cilmi-baarayaasha inay gabagabo khalad ah (sida ugu dhakhsaha badan u muujin doonaa). Inkasta oo khilaafaadka muhiimka ah ee u dhaxeeya tijaabooyinka iyo tijaabooyinka la isku haysto, cilmi-baarayaasha bulshadu inta badan waxay isticmaalaan shuruudaha is-beddelka. Anigaa raaci doona shirarkan, laakiin, qodobo gaar ah, Anigu waan jebin doonaa shirarka si aan u xoojino qiimaha tijaabooyinka la xakameynayo ee tijaabooyinka ah ee tijaabada ah iyada oo aan loo kala soocin iyo koox koox ah.
Dhibaatooyinka la isku haleynayo ayaa la xaqiijiyay in ay noqdaan hab awood badan oo lagu baran karo adduunka bulshada, iyo cutubkan, waxaan ku tusi doonaa wax badan oo ku saabsan sida loo isticmaalo cilmi baaristaada. Qeybta 4.2, waxaan ku muujin doonaa tusaalooyinka asaasiga ah ee tijaabinta iyadoo la adeegsanayo tijaabo lagu sameeyay Wikipedia. Ka dib, qaybta 4.3, waxaan ku sharxi doonaa farqiga udhaxeeya tijaabooyinka shaybaadhka iyo tijaabooyinka goobta iyo farqiga u dhaxeeya tijaabooyinka analogga ah iyo tijaabooyinka casriga ah. Waxaa intaa dheer, waxaan ku doodi doonaa in tijaabooyinka dijitaalka ah ee dijitaalka ah ay bixin karaan sifooyinka ugu fiican ee tijaabooyinka shaybaarada analogga ah (koontarool adag) iyo tijaabooyin tijaabo ah oo simogasho ah (dhabta ah), dhammaanba miisaan aan hore loo arag. Marka xigta, qaybta 4.4, waxaan ku sharxi doonaa saddex fikradood-ansax ah, hir-gelinta saameynta daaweynta, iyo hababka- kuwaas oo muhiim u ah sameynta tijaabooyin hodan ah. Iyada oo asalka ah, waxaan ku sharxi doonaa ganacsiyada ka qaybqaata labada istiraatiijiyadeed ee muhiimka ah ee qabashada tijaabooyinka dijitalka ah: adigu adigu iskaa wax u qabso ama aad la wadaagto awoodda. Ugu dambeyntii, waxaan ku soo gabagabeyn doonaa qaar ka mid ah talooyinka naqshadeynta ee ku saabsan sida aad uga faa'iideysan kartid awoodda dhabta ah ee tijaabooyinka dijitalka ah (Qeybta 4.6.1) iyo sharaxaad ka bixi qaar ka mid ah masuuliyada la timaadda awoodaas (qaybta 4.6.2).